Ngenhlanhla, sekuyisikhathi eside yasungulwa amadivayisi ukuphepha umlilo. Siyabonga kubo, usengakwazi ukuthi isheshe itholakale ukunquma umlilo futhi ushayele umlilo ngesikhathi. yethula abafundi bezincwadi zakhe ukuba isihloko nge eyodwa yalezi amadivaysi. Ngakho, kudivayisi, iziphi kuzocatshangelwa lapha - "Astra-812". Lesi sihloko uzokutshela mayelana wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukusebenza kule divayisi: abanye babe imishini, kanjani ukulawula yokufuna idatha. Manje, izinto zokuqala kuqala.
Idivayisi ethola kanye nokulawula "Astra-812": Intengo
Okokuqala ngingathanda ukukhuluma mayelana izindleko zedivayisi. "Astra-812" - akulona nje imodeli amadivayisi ekhiqizwa ngumkhiqizi. Uma sicabangela lokhu imodeli, kanye nabanye lenkampani efanayo ke singasho ukuthi eqolo. Ukuqinisekisa la mazwi, ungaqhathanisa idivayisi "Astra-812" isibonelo, "ngokwezwi Astra-713".
Imodeli lokuqala izobiza ecishe ibe yizinkulungwane eziyisithupha, kanti eyesibili - mayelana emibili nengxenye ayizinkulungwane. Ububanzi mikhulu, kodwa pay lokho. Ukusebenza kanye operability, esesikhundleni "Astra-812", umyalo ezidlula ephakeme ukwedlula "Astra-713". Kodwa lokho umthengi uthola imali? Iziphi izici futhi izindlela kuyinto kule divayisi? Okuningi ngalolo ngezansi.
Ngakho, nge ebhokisini kanye ithuluzi ngokwayo ufika uphelele imfundo manual. It okhandlayo adalule zonke izici Umgomo we operation. Ngaphezu kwalokho, incwadi echaza yonke izinkinobho iyunithi isiqu esithi "Astra-812" - okungukuthi, aphendule ngalokho omunye kuyinto inkinobho. ingatholakala imiyalelo ukuthi idivaysi has umagazini okhethekile, lapho zonke umsebenzi kudivayisi kuchazwa ngokucacile.
Futhi, usebenzisa imenyu, ungabheka isimo ezisebenza zedivayisi, futhi uma kukhona amaphutha noma amaphutha, lolu hlelo luyoba ngokushesha ukwazi ngakho. Ngaphezu kwalokho, idivayisi ungasebenza izindlela eziningana.
Zindlela ukusebenza kwe-apharathasi
Njengoba kushiwo ngenhla, zikhona izindlela eziningana ukusebenza idivayisi "Astra-812". Operating Imiyalelo ubala bonke futhi uchaza indlela ukusebenza nabo. Kule ngxenye, umfundi uzokwazi ukufunda okwengeziwe ngazo.
Uma ucabangela izindlela, kubalulekile ukucacisa lokho kungaba lesifanele ukukhuluma hhayi mayelana nohlobo idivayisi, kanye operation edluliselwe, okuyinto asethwe khona. Inani udlulisela ezimbili. izinhlelo zomsebenzi - ezintathu:
Imodi lokuqala - "Beep". Endabeni iinthombe edluliselwe Imodi lokuqala ivuliwe, uma i-alamu loops (izihibe) izinhlobo okuthiwa nokuvikeleka ijwayelekile. A ivaliwe lokhu edluliselwe kuyoba icala, uma kukhona ngaphandle okungenani olulodwa RC. I edluliselwe yesibili futhi ukwazi ukusebenza kule modi. It uzovulelwa uma uhlobo umlilo alamu iluphu kuyinto evamile. Futhi uzovalwa kuphela lapho aphuma kwebanga omunye izihibe.
Imodi Landelayo - "I-alamu". I edluliselwe lokuqala izovalwa uma zonke kuyoba evamile, futhi livulekele uma kwenzeka overshooting okungenani omunye izihibe. Eyesibili edluliselwe uhlobo fire works ncamashi ngendlela efanayo.
Kugcine, imodi yesithathu - "Lawula isibani". Isimiso ezisebenza we udlulisela ezimbili kufana Umgomo we operation ikumodi yesibili.
Konke izindlela ukusebenza idivayisi "Astra-812". Iziqondiso ukuchaza ngokuningiliziwe.
Mayelana izindlela zonke wakhuluma mayelana nokucosha kakhulu. Kuyini kule divayisi? Ubukhulu bayo ke kancane like intercom yohlelo efakiwe umnyango nomnyango. On the front uhlangothi kuba screen encane. He is impela ulwazi. On ke alotshwe isikhathi, usuku, imodi wokusebenza. LCD screen, hhayi ukukhanya. Okuningi ukuthi kuyamthokozisa kuwo, ngakho kungenzeka ulungise izinga kwasemuva. Ngamanye amazwi, kungenzeka noma licace noma mnyama.
Ngaphansi kwesikrini, ohlangothini lwesobunxele, ungabona umcibisholo okhiye ezine ezihlukene. Lezi imicibisholo asetshenziselwa ukuba baphumelele kulolu hambo imenyu zedivayisi "Astra-812". Maphakathi kuziinlodlhelo yezinombolo kusuka 0 kuya eziyisishiyagalolunye. Ngakwesokudla maningi izinkinobho ezine: "KULUNGILE", "C", "*" futhi "#". inkinobho maphakathi no-isayizi, ngakho ukuzisebenzisa ngempela elula. On kweminye imihlobo, khi mancane kakhulu futhi ungacindezeli kubo njengoba elula njengoba lapha.
Ohlangothini reverse of the Isixhumi se-USB, ungabona iziqobosho kudivayisi hang iyunithi odongeni, umgodi kahle esikhulu ukuxhuma izintambo ezidingekayo iyunithi. Kuyathakazelisa ukuvula ikhava yangemuva zedivayisi. Ngokuvamile kukhona umgodi noma iyiphi ithebhu ukuvula ikhava. Lapha, akekho omunye futhi lo omunye akumelwe. Kodwa kukhona inkinobho elula kwi ezingemuva we chassis. On ke udinga push kancane, futhi konke - isivalo ivuliwe.
Indlela ukufaka kudivayisi
Asikhulume kancane mayelana nendlela ukufaka kule divayisi. Okokuqala sidinga ukwenza izimbobo ezidingekayo ogangeni. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba uvule ikhava zedivayisi futhi ibenze iyiphi elula ngendlela stub okungukuthi ekuqaleni imbobo avaliwe kufakwe izintambo. Ngemva kwalokho, kumelwe wenze zonke kudingeke ukuba uxhume izintambo futhi silungise kumila phiko. ukufakwa Eminye Kwenziwa ngokuqinile ngokuvumelana izikimu elicacisiwe bhukwana imfundo. Lapho ukufakwa sekuphelile ngokuphelele, ungakwazi uvale lid.
yesiqinisekiso Umenzi sika
Nomkhiqizi wedivaysi "Astra-812" lithi kungakapheli iminyaka emithathu, abathengi bangabheka phambili ulungiswe khulula. Kwabe sekuqala inkathi okwakungenziwa ukusebenza idivayisi - isukela eminyakeni emihlanu kuya kweziyisithupha. Njengoba kunjalo nge kunoma iyiphi enye idivayisi, umenzi unelungelo eligcwele senqabe ukulungisa, uma idivayisi has a umonakalo mechanical ukuthi zazibangelwa ikhasimende. Isizathu sesibili kungenzeka ngokwehluleka - alisebenzisi idivayisi inhloso yazo noma uxhumano okungafanele. Ngakho-ke kudingekile ukuba sizihlole zonke izinto imiyalelo ngokucophelela.
Ukuphepha kuqala. Futhi ukuqinisekisa ukuphepha idivayisi ngeke "Astra-812". Ukuze imali encane umuntu ungakwazi ukuthenga unogada ngubani ukukunikeza isivikelo emililweni iminyaka eminingi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kumelwe ufunde imiyalelo ngaphambi ukuxhuma futhi uqale ukusebenzisa lisebenze. Kuphela sizosebenzisa idivaysi "Astra-812" ephephile nephumelelayo.
Indlela ukukhetha engenantambo intercom nohlelo emizini yabazalwane
Summer WC: usayizi kanye nomklamo
Adume cocktail "Northern Lights"